Wednesday October 13, 2021 - 08:16:22 in News by Hadhwanaag News
"waxay sheegeen in Soomaaliya aysan caddeynin in horey ay u ansixisay heshiiska xuduudda ay sheeganeyso. "
Uhuru Kenyatta, ayaa ka digay in go'aanka Maxkamadda ICJ ay inta badan baddii lagu muransanaa ay ku siisayay Soomaaliya uu waxyeelayn doono xiriirkii ka dhaxeeya labada dal.
Madaxweynaha Kenya waxa uu gebi ahaanba ku gacanseeray xukunka ay maxkamadda ka soo saartay badda la sheegay inay ceegaagaan gaaska iyo naaftada, isagoo sheegay in arrintaasi ay isbaddel wayn ku keeni doonto horumarka dhaqaale iyo midka siyaasadeedba, ayna halis gelin doonto ammaanka gobolka Geeska Afrika.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya oo la hadashay weriyaha BBC Ferdinand Omondi, waxay sheegtay in ay ku adkeysaneyso go'aankeedii isbuucii hore ee ahaa in aysan aqoonsaneynin xukunka Maxkamadda Cadaaladda Adduunka.
Garsooreyaasha oo ka koobnaa 14 ee u fadhiistay go'aan ka garidda khilafka, waxay sheegeen in Soomaaliya aysan caddeynin in horey ay u ansixisay heshiiska xuduudda ay sheeganeyso.
Madaweynaha Somaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed "Farmaajo" ayaa sheegay in go'aanka kasoo baxey Maxkamadda Caalamiga ee Caddaaladda, ee ku saabsanaa muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, uu yahay mid caddaaalad ah.
Balse inkastoo Kenya ay horey u diiday in ay aqbaleyso go'aanka maxakamadda, haddana ma cadda waxa ay sameyn doonto. ICJ awood uma lahan meelmarinta xukunkeeda.
Isagoo hadlayay ka hor go'aanka maxkamadda, Mahdi Maxamed Guuleed oo ah Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya, wuxuu BBC u sheegay: "Waan aaminsannahay in xukunka uu yahay hannaan... Waa sababta aan u nimid maxkamadda".